News and Update - +++++NCS+++++
History Of Christian In Nepal
आदरणीय सल्लाहकार, केन्दिय सदस्य ज्युहरु जिल्ला समाज, ईकाइ समाज, पाष्टर तथा अगुवाहरु सबैलाई येशु ख्रीष्टको विजयी नाउँमा जयमसिह साथै अभिवादन !
अगुवा विकास तालिम सम्पन्न
जेष्ठ २९ गतेदेखि असार १ सम्म सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा अगुवा विकास तालिम सम्पन्न भएको छ जसमा ७० जनाको सहभागिता थियो र यो अगुवा विकास तालिमको दोस्रो हप्ता रहेको थियो। त्यहि तालिमको अवसर पारि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको नक्सा राखी उक्त जिल्लाको लागि विशेष प्रार्थनाको समय पनि छुट्याइएको थियो। अगुवा विकास तालिम सम्पन्न जेष्ठ २९ गतेदेखि असार १ सम्म तनहुँ जिल्लामा भएको अगुवा विकास तालिम सफलता पुर्वक सम्पन्न भएको छ। ४५ जना सहभागी रहनुभएका उक्त कार्यक्रममा जिल्लाको लागि पनि विशेष प्रार्थना समय छुट्याईएको थियो। यसै गरि अन्य विभिन्न ५ वटा ठाउँमा अगुवा विकास तालिम हुँदै आइरहेको छ।
हुम्ला जिल्लाको किरण बुढालाइ धर्म परिवर्तन, मानव वेचविखन तथा ओसारप्रसारको अभियोगमा जेल चलान
१५ वैशाख, ललितपुर । विगत ३ वर्ष अघि २०७१/१/९ गते हुम्ला जिल्ला स्याडा गा.वि.स. वडा न.ं ४ बस्ने किरण बुढालाई जिल्ला अदालत विराटनगर पुनरावेदनले धर्म परिवर्तन, मानव वेचविखन तथा ओसारप्रसारको अभियोग लगाएको थियो र हाल किरन बुढालाई साँढे एक वर्षको लागि जिल्ला अदालतले जेल चलान फैसला गरेको छ र नेपाल ख्रिष्टियन समाज यस घटनाप्रति दुखद जाहेर गर्दछ। यस दुखद परिस्थितिमा सम्पूर्ण मण्डली परिवार प्रार्थनामा लागिरहनु हुनको लागि ख्रिष्टियन समाज हार्दिक अनुरोध गर्दछ।
बृहत राष्ट्रिय भेला
यहि मिति २०७४ साल कार्तिक ६ देखि ८ गते तदानुसार 2017 अक्टुवर २३ देखि २५ सम्म मार्टिन लुथर रिफर्मेशनको ५०० वर्षको अवसर पारि नेपाल ख्रिष्टियन समाजले नेपालका विभिन्न मण्डली सम्प्रदायका पास्टर तथा अगुवा, संघसंस्था, ७५ जिल्लाका इसाई समाज र अन्य अगुवाहरुबीच बृहत राष्ट्रिय भेला गर्ने निर्णय गरेको हुँदा नेपाल ख्रिष्टियन समाज यहाँहरुमा प्रार्थनाको लागि हार्दिक निवेदन गर्दछ।
अन्य प्रार्थनाका विषयहरू:
झुटो मुद्धामा सल्यान जिल्लामा पक्राउ परेका ४ जना विश्वासीहरूको तत्काल रिहाइ हुन सकोस् ।
नेपालमा भएका सम्पूर्ण मण्डलीहरू ख्रीष्टको शरीरजस्तै एक हुन सकोस् ।
राज्यमा ख्रीष्टियनहरूप्रति भएको व्यवहार र सबै प्रकारका धर्म भिन्नताहरु रोकियोस् ।
हाम्रो पश्चाताप र आज्ञाकारीताबाट राष्ट्र निको हुन सकोस् ।
हाम्रो सेवकाईहरूमा थप प्रोत्साहन मिल्न सकोस् ।
यी दिनहरूमा आईपरेका कानुनी समस्याको समाधानका लागि ।
समसामयिक विषयहरूको लागि पनि प्रार्थना गरौं ।
सरकारी अधिकारीहरू, राजनीतिक दल तथा उच्च ओहदाका व्यक्तिहरूको निम्ति प्रार्थना गरौं ।
सुसमाचार तालिम र समूदायिक विकासको क्षेत्रमा गरिएका सेवाकाईको लागि प्रार्थना गरौं ।
बाँकि क्षेत्र मा हुन गैरहेको चुनावको लागि पनि प्रार्थना गरौं ।
नेपाल ख्रीष्टियन समाजले देश विदेशमा भएका सबै व्यक्तिहरूको बीचमा सहकार्य गरिरहेको छ, प्रार्थनामा सम्झिदिनुहोला।